★မြန်မာ့အလင်း★: ကောင်းကင်ခရီးနှင့်ပျံကြွသွားသည့် ရဟန်းတစ်ပါး
ဘလော့ကိုလာရောက် လည်ပတ်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သဒ္ဓါပွားနိုင်ရန် ရဟန်တစ်ပါး ကောင်ကင်ခရီးပျံကြွနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဗီဒီယိုအပေါ် သံသယရှိကောင်း ရှိမှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကတော့ လုံးဝ စစ်မှန်တယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အချက် ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က လုံးဝ ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ဗီဒီယိုအတုတွေဟာ အမြဲမှုံဝါးနေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန် အစိုးရ လုပ်ထားတဲ့ ဘင်လာဒင်ဗီဒီယိုအတုကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ နောက်ခံစကားပြောနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အသံဟာ ဟန်ဆောင်ထားတာ မဟုတ်ပဲ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ သိသာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုဗီဒီယိုကို တင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တချို့က ရဟန္တာဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်နေပါတယ်။ မိုးပျံမြေလျှိုးလုပ်ဖို့က အဘိဥာဏ် တန်ခိုးရှိရင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဘိဥာဏ်တန်ခိုးနဲ့ မိုးပျံနိုင်တဲ့ ရသေ့တွေ ဘုရားမပွင့်မှီကတည်းက ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဟန္တာဆိုတာကတော့ ကိလေသာကုန်ခန်းပြီးသူမို့ အဘိဥာဏ်တန်ခိုးထက် ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။ သေခြာမသိပါပဲ ရဟန္တာလို့ ပြောချင်းထက် ရဟန်းတစ်ပါးလို့ သုံးနှုံးခြင်းက ပိုမို သင့်တော်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ (မှားယွင်းချက်များရှိက ပြင်ပေးပါ)
ဟာ ဟာ ဟာ ..................
အော ဒီရဟန်း က အနော်ရထာလမ်း က ခိုးကူးခွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ဆင်းရဲသားကား ( အောကား ) လာ ဝယ်တဲ့ ဖွန်ကြောင် ဖုန်းကြီး ပဲ
ခွေးလိုမျိုးပွားနေသော မုတ်စုတ်လိင် များအတွက် အကောင်းဆုံး ဆုလာဘ်မှာ ၄င်းတို့ ၏ ယောက်ျားဘ၀ကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန်နှင့် မျိုးစပ်ဝက်သိုးများဖြင့် ၄င်းတို့ကို ဖင်ချစေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလာ ကြီး၏ မိန့်မှာချက်အရ တမာန်တော် ဟိုဟာမက်ကြီးသည် လိင်မှုကိစ္စတို့ကို မျိုးစုံလိုက်စားရာ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်မှာ ၀က်ကိုဖင်ခံပါက အလွန်ကောင်းသည်ဟု သိရပေသည်။ တမာန်တော်ကြီးသည် မသာပေါ်လုဆဲဆဲ အိုက်ရှာ သူငယ်မ ၇င်ခွင်တွင် ရှိစဉ် ၀က်သားမစား၇န်နှင့် ၀က်ကိုဖင်ခံကြရန် မိန့်ကြားစဉ် တ၀က်တပျက် နှင့် အသက်ထွက်သွားသောကြောင့် ဖြစ်သတည်း။ အလာကို ကိုးကွယ်ပြီး တမာန်တော်ကို ယုံကြည်သူ မုအ်မင် တို့သည် ၀က်လီးကိုစုပ်သင့်ကြပေသတည်း။ (ဟဒီးဆ် = ငါ့လီး)
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကျွန်ကုလား martin
ကယ် ကိုယ်မေကိုယ်လိုး မင်းလဲကုလားလိုးပြီးထွက်လာတဲ့အကောင်ပဲမဟုတ်လား
မင်းတို့က သမိုင်းမှာ အမေကိုပြန်လိုးခဲ့တဲ့ ဗမာမျိုးတွေဆိုတာမင်းသိတယ်နော် မသိရင်လဲသမိုင်းပြန်လေ့လာကြည့်လိုက် ဟေ့ရောင်မင်းကုလားကိုအစော်ကားနဲ့ စော်ကားရင်မင်းအမေမင်းအမေမင်းပြန်လိုးတာနဲ့ပိုဆိုးသွားမယ် ဟေ့ရောင်မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါတမ မကကုလားနော် ကုလားပြည်ကလာတာ မင်းတို့ကကုလားလီးကိုထိုင်စုပ်နေတာ မင်းတို့ဂေါတမ အမေကိုတောင်ကုလားလိုးသွားလို့သူမွေးလာတာ အကယ်လို့မင်းတို့မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးရင်မင်းတို့လူမျိုးနေရာမှာ ဘာလူမျိုးထည့်ရေးမှာလဲငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်ပြောစမ်းကွာ သေချာတာကတော့အိန္ဒိယကုလားလို့ရေးမှာ ကုလားလိုးတာတောင် ဇာတာမကောင်းတော့မင်းတို့ဂေါတမက ယောက်ျားယောင်ယောင်မိန်းမယောင်ယောင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ ဖင်ခံမယ့်အခြောက်တစ်ယောက်ရုပ်နဲ့သေသွားတာ အဲ့ဒီလိုယုတ်ညံ့တဲ့ကုလားကို ကိုးကွယ်နေတုန်းပဲလား နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ် မင်းတို့ဂေါတမ သူ့အမေဗိုက်ထဲမှာရှိတုန်းက သူ့မျက်နှာကို စတွေနဲ့ထွေးသွားတာကုလားနော် မင်းကုလားကိုစော်ကားရင်လှော ကားခေါ်သွားပြီးမင်းကိုပါဖင်လိုးပြီးသတ်ပစ်မယ် နောက်တစ်ခုကတော့ မင်းသိအောင်ပြောပြမယ်ကွာ မင်းတို့ဂေါတမက ဖင်ခံချင်တော့ ဝက်ဖြူကြီးနဲ့ဖင်ခံပြီးဖင်ချချင်တော့ဝက်ဖြူမကို တက်ချတယ်လေ အဲ့ဒီတော့ဝက်ဖြူကြီးက မြင်သွားလို့ ပက်ထဲ့လိုက်တာ မင်းတို့ ဂေါတမက သေသွားတယ် ဆက်ပြောရရင် ကုလားထွေးလိုက်တဲ့တံတွေကြောင့် နာဖူးမှာ ပူတူးလေဖြစ်သွားပြီး ကြောက်ပါပြီးဆိုပြီး နာရွက်ဆွဲထိုင်ထလုပ်တာများသွားလို့နာရွက်ကြီးက ရှည်သွားတာ မင်းမသိသေးလို့ငါဆက်ပြောပြမယ်ကွာ မင်းတို့ဘုရားကိုငါမြင်လိုက်တိုင်းလက်တားပြီးကြောက်ပါပြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းငါမြင်နေလို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့
သူက ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ တော်ပါပြီး ငါ့ဖင်တွေကျိန်းကုန်ပြီးကုလားတွေဝိုင်းမလိုးကြပါနဲ့တော့ဆိုပြီးတောင်းပန်နေတာ ငါ့အမေကိုလဲကုလားလိုးပြီးငါ့ကိုမွေးလာပြီးပြီးငါ့ါအမေတော့ကုလားလိုးလို့သေပြီး ငါပါ ကုလားလိုးလို့သေတော့မှာဆိုပြီးကုလားတွေကိုလက်ပြပြီးတောင်ပန်နေတာ ကယ်ငါ့ညီး မင်းဖင်ခံချင်ရင် ငါ့အီးမေးကိုဆက်သွယ်လိုက်ကွာ ငါလဲလီးမင်းအမေကိုလိုးရတာသိပ်မကောင်းတော့ဘူး မင်းဖင်ကိုပဲလိုးချင်တော့တယ်ကွာ မရှင်းတာ ရှိသေလားဟေ့
ဗုဒ္ဓဘုရားက၀က်ပျိုသားစားပြီးတော့ဝမ်းတော်လားလို့မင်းတို့က၀က်သားမစားတာ...မင်းတို့ဘုရားလို့ခေါ်နေတဲ့မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ကောင်သိတယ်. အဲဒါကြောင့်မင်းတို့ဝက်သားမစားတာ ခွေးသားဝက်မြေးကြက်ယောက်ဖ မအေလိုးတွေ...မမင်းက္ကာကပြန်လာရင်မင်းတို့တွေဗုဒ္ဓကိုပြောင်းရတာ...မင်းတို့တွေမက္ကာသွားရင်ခေါင်းထောင်ပြီးတောင်မော်မကြည့်ရဲဘူးမဟုတ်လား အပေါ်မှာခွေးပုံ ၀က်ပုံ ကြက်ပုံတွေပဲကန်တော့ပြန်ခဲ့ရတဲ့ကောင်တွေ....ကိုမေကိုလိုးတွေ
မင်းတို့မကျေနပ်ရင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်လိုက် tarnaw14@ ဟုတ်ပြီလား မင်းတို့ကောင်တွေကို ကုလားဗမာအရေးအခင်းဖြစ်ရင်ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့မိန်းမတွေကိုအကုန်သတ် အသက်ငယ်တဲ့ကုလားမလေးတွေကိုလိုးပြီးသတ်ပစ်မယ် ငါလိုးမမွတ်ဆလင်တွေ ကိုမေကိုလိုးခွေးမသားတွေ
မူဆလင်ဘာသာဆိုတာက အစွန်းရောက် ယုံကြည်မှု့ဘဲ့
ဆိုးတာက တော်တော်အဆင့်တန်းမရှိတဲ့ဘာသာကို ကို့ကွယ်တဲ့သူက ကမ္ဘာမှာ လူများစုဖြစ်နေတယ်
ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်ထဲကအတိုင်း ကမ္ဘာကြီးဟာ ဆုတ်ကပ်ထဲ ရောက်လာပြီထင်ပါရဲ့ မတရားမှု့တွေ အားကြီးလာနေပြီ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ
ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေ မေတ္တာတရားကိုသာ လက်ကိုင်ထားကြပါစို့ ပြီးတော့ အသက်နဲ့လဲပြီး သရဏာဂုံ ကို ထိမ်းသိမ်းကြရအောင်
ကိုယ့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မေတ္တာဝါဒီပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ
သူတို့ရိုင်းတိုင်းသာ ကိုယ်တို့ပါလိုက်ရိုင်းရရင်တော့ ကိုယ့်တို့လည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲနဲ့ ဘာထူးတော့မှာလည်း
ဒီတော့ ကိုယ်တို့ အထက်တန်းကျတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေဆိုတာ ပြကြရအောင်
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဆင်းရဲလွန်းတော့ ထွက်ပေါက်ရှာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူတို့ဟာ ရှေးကတည်းက ကိုယ်တို့နိုင်ငံသားတော့မဟုတ်ပါဘူး နအဖအပေါ်အနောက်အုပ်စုက ဖိအားပေးနေတာကို အသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း ရှိမှာပေါ့
ပြီးတော့ နအဖမှာလည်း ကိုယ့်ကျိုးရှာတတ်တဲ့ အရာရှိကြီးတွေရှိသလို့ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းရှိမယ်လို့ ယုံကြည့်မိတယ်
I didn't know the Muslims have such horrible thoughts about our Lord Buddha. As Buddha preaches compassionate love (metta) and peace, let's just forgive these Muslims who committed such big bad deeds (a-kutho) against Buddha and just pity them as they are going straight to the deepest hell when they dieahorrible death. I never thought I would lie to see these nasty words spoken against our Buddha.
မအေငိုပြန်ိုံးမိလို့ တသက်လုံး ဆောက်ပက်ကိုထိုင်ကတော့ ပြီးတော့ ခွေးလီးပုံစံ ဦးထုပ်ကို တသက်လုံးဆောင်းထား ရတာတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ဟောင်နိုင်သေးတဲ့ မွတ်ဆလိင် တွေ မိုးရွာတိုင်းမိုကြိုးပစ်ပါစေ .... လမ်းသွားတိုင်းကားတိုက်ပါစေ....
အမျိုးယုတ် ကောင်တွေ